ချစ်ကြည်အေး: မေမေ့မိုးကောင်းကင်ထက်က အဝါရောင်တိမ်တိုက်ဟာ သားကလေးပါ
သားကလေးဟာ မေမေ့ရဲ့ ကြယ်ကလေးတစ်စင်းပါ
မေမေ့မိုးကောင်းကင်မှာ မေမေ့လက်နဲ့ ခြယ်မှုန်း အတောက်ပဆုံးပေါ့
သားဟာ မေမေ့မိုးကောင်းကင်က သက်တန်ကလေးတစ်စင်းပေါ့
အရောင်အသွေးစုံလင်လှပ မေမေခဏခဏ မော့ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ သားကလေး….
မေမေ့ဝမ်းကြာတိုက်ဟာ သားဆိုတဲ့ မျိုးစေ့ကလေး စိုက်ပျိုးရှင်သန်ခဲ့ရာ
မေမေ့အကြင်နာ မေမေ့ဂရုတစိုက်တွေဟာ သားကြယ်ကလေးအတွက် မြေသြဇာ
မေမေ့ဝမ်းကြာတိုက်မှာ ကိုးလတိုင်တိုင် အေးအတူ ပူအမျှ
သံယောစဉ်ကြိုးကလေးကတစ်ဆင့် မေမေတို့ တစ်သားတည်းရှိခဲ့ကြတာ
မေမေသောက်တတ်တဲ့ စီးကရက် မေမေသိပ်ကြိုက်တဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်
မေမေ့မိုးကောင်းကင်က အဝါရောင်တိမ်တိုက်ဟာ သားကလေးပါ
မေမေ့မျက်ဝန်းတွေကို မော့ကြည့်ရင်း ကမ်းပေးလာတဲ့ သားလက်ဖဝါးနုနုတွေထဲ
ပျော်ရွှင်ရင်ခုန်စွာ ရေတွက်ခဲ့ရတဲ့ သားကလေးရဲ့ သွားငုတ်တုတ်လေးတွေ
ပိုးစားခံရတဲ့ သွားမည်းမည်းကလေးတွေကအစ မေမေ သိမ်းထားခဲ့ပေါ့
သားကလေးဟာ ကြယ်ကလေးတစ်ပွင့်လို ဖျတ်ကနဲ ကြွေသွားတဲ့အခါ
သက်တန်ကလေးတစ်စင်းလို ခဏတာ လင်းချင်းခဲ့ပြီး လွင့်ကနဲ ပျောက်သွားတဲ့အခါ
အဝါရောင်တိမ်တိုက်ကလေးလို ဗြုန်းကနဲ အုံ့ရွာသွန်းချလိုက်တဲ့အခါ
မေမေ့မိုးကောင်းကင်ဟာ သားနဲ့အတူ လဲပြိုကျခဲ့ရ….
ပန်းပွင့်ကလေးတွေလို သားနှုတ်က တီတီတာတာ သီကုံးပြောတတ်စ စကားပွင့်ကလေးတွေ
မေမေ တစ်ပွင့်စီ ကောက်ယူနေတုန်း….
သားကလေးရဲ့ မျက်ဝန်းထဲက ဘာသာစကားတွေ မေမေ သင်ယူနေတုန်း
သားကလေးရဲ့ အကြည်အမွေ့တွေ မေမေ့နှလုံးသားနဲ့ ဖတ်ရှု့နေတုန်းပါကွယ်
မေမေ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာ သားကလေးဟာ ထာဝရ ရှင်သန်…
မိတ္ထီလာကန်တော်အောက်က ဖားကောက်ခဲ့ပါ မျက်လုံးရယ်ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ဖားကောင်ကသေး
အို အို အေး အေး မေမေ တေးဆိုချော့သိပ်ချင်သေးရဲ့
မေမေ့အိပ်မက်မှာ သားကလေးဟာ ချည်ခင်ထွေးကလေးတစ်စ မေမေ့ကို လှမ်းပေးနေခဲ့
ချည်လုံးကလေး အဆုံးမှာ သားလက်ကလေး မေမေ လှမ်းယူမိသေးတယ်…မမီမကမ်းပေါ့
မေမေ့ရင်မှာ မေမေ့ဝမ်းထဲမှာ တစ်နေရာစာ….
မေမေတို့ တစ်ကနေ ပြန်စကြရအောင်….
မေမေ့တိမ်တိုက်ကလေး မေမေ့သက်တန်ကလေး မေမေ့ကြယ်စင်ကလေးရယ်…
သားကလေးဟာ မေမေ့ရဲ့ ကမ္ဘာ...
သားကလေးဟာ မေမေ့ရဲ့ အတုမရှိ စကြာဝဠာ...
သား က လေး....
သား က လေး ဟာ....
*မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲကို အငှားခံစားပြီး မမီမကမ်းရေးဖွဲ့ပါတယ်ရှင်....
Thandar Lwin Wed Apr 10, 09:32:00 AM GMT+8
Cameron Wed Apr 10, 04:09:00 PM GMT+8
ကဗျာကလေးဖတ်ရတာ ကြည်နူးမှုလေးကို ကူးလူးယူလာခဲ့ပြီး အဆုံးမှာ ၀မ်းနည်းမှုတွေက တအုံတခဲနဲ့
ညီလင်းသစ် Fri Apr 12, 07:14:00 PM GMT+8
သာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတဲ့ နံနက်ခင်းလေး တစ်ခု.. ဖူးပွင့်လာတာကို ကြည့်နေတုန်း ရုတ်တရက် လေနီကြမ်း တိုက်ချလိုက်သလိုပါပဲ...၊
ကြည်နူးစရာ ကောင်းသလောက် ကြေကွဲရတဲ့ ကဗျာလေး....။း(
အမ်တီအန် Sat Apr 13, 07:37:00 PM GMT+8
ဖတ်အပြီး ရင်ထဲမှာ နင့်ခနဲ..